Sida Loogu Fasaxo Pizza-daada ... Martech Zone
Sida Loogu Fasaxo Badeecadaada Pizza S er… Waxyaabaha Ay Kaga Iibiso Onlineka
Isniin, February 16, 2015 Khamiista, Oktoobar 29, 2020 Douglas Karr
Saaxiibkeyga wanaagsan, James, ayaa iska leh Brozinni Pizzeria. Ma doonayo inaan ku wareero - waa run ahaantii pizza-ka ugu fiican New York ee Indy. James waxoogaa ayuu naga caawiyay, isaga oo keenaya cajaa'ibtiisa Gawaarida pizza Indianapolis ururinta lacag uruurinta sanadkii la soo dhaafay iyo u adeegida dhacdo soo socota toddobaadkan aan qabanno. Taa bedelkeeda, waxaan u dhaqaaqnay inaan u qaabeyno goob isaga u gaar ah.
Markii aan u dhaqaaqnay qaabeynta goobta, waxaan ogaanay inay jiraan hal shay oo muhiim ah - oo aan u oggolaanno cuntada inay hadasho. Pizza waa cuntada ugu fiican ee loogu talagalay sawirrada - oo leh midabbo cajaa'ib leh oo aad si dhaba u urin karto adigoo fiirinaya. Maxaad ugu qarineysaa sawirrada looxyada yar yar barta oo dhan oo ay ka buuxdo hagitaan, dhinac dhinac, iyo meelo kale oo lumin? La shaqeynta James iyo kooxdiisa, waxaan go'aansanay inaan cusbooneysiino oo aan wax ka badalno an theme makhaayad la yaab leh taasi waa mid aad u macquul ah.
Waan dhisi lahayn mawduuc caadiya - laakiin si daacadnimo ah uma qalanto dadaal dambe. Naqshadeeyayaasha mowduucyada ayaa kaliya sameynaya shaqo la yaab leh oo ku saabsan dhisidda mowduucyo dabacsan oo ay iibiyaan kumanaan laakiin taas ayaa si heer sare ah loogu qaabeyn karaa sidii aan ku sameynay bogga Brozinni. Mawduucu wuxuu la yimaadaa dhammaan adeegyada:
Faylasha Photoshop haddii ay dhacdo inaad jeceshahay inaad u habeysid sawirada asalka ah ee la adeegsaday.
Jaangooyooyinka Parallax ku raaxeysanaya socodka iyo bixinta heer sare oo casriyeysan.
Naqshadaha jawaabta leh oo umuuqda sida ugu qurxan mobilada ama kaniiniga sida ay ugu muuqdaan desktop-ka.
tuuryo taas oo u oggolaanaysa badhannada, kala-qaybiyeyaasha jiifka ah, astaamaha iyo qaababka tiirarka.
Mawduuca carruurta loo dhisay si aanad ugu baahnayn inaad dhex marto oo aad u habeyso mawduuca asaasiga ah - oo badanaa lagu cusbooneysiiyo taageerada ama sii deynta amniga.
Cinwaanka waxaa lagu martigaliyay Shabakadaha Xallinta sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan la tagno WordPress martigelinta halkaas mistake qalad weyn. Waxaan macno ahaan udhaafnay xadka xawaareynta kaliya cusbooneysiinta feylasha mowduuca! Markii aan ka codsaday caawimaad kooxdooda taageerada, waxay doonayeen inay igu kallifaan taageero farsamo oo ay igu soo celiyaan saacadaha shaqada. Ugh.
Waan qaniinay xabada waxaanan galiyay goobta qorshaha martigelinta oo buuxa, cadaadiyey dhamaan sawirada adoo adeegsanaya Kraken, ka dibna la qaabeeyey Rabshad WP si gacan looga geysto dardargelinta goobta. Waan arki doonaa sida ay u shaqeyso toddobaadyada soo socda ka hor intaanan go'aan ka gaarin haddii aan u baahanno inaan u wareejino martigelin wanaagsan.
Khadka hoose: Ma ahayn wax aad u adag ama qaali ahayn in la dhiso goob gaar ah oo leh mawduuc weyn iyo martigelin dhexdhexaad ah. Waxaan isha ku hayn doonaa hada sida ugu wanaagsan ee barta wax qabadku u socdo iyadoo la raacayo amarro raadin, bulsheed, iyo gawaarid!
Tags: brozinnidesigndesign webbogga internetka
Douglas Karr Monday, February 16, 2015 Thursday, October 29, 2020
Socialdraft: Kalandarkaaga Warbaahinta Bulshada iyo Madbacadda Daabacaadda
4 Talooyin Muhiim ah oo ku Saabsan Hantida Sawirkaaga
Jun 22, 2015 at 10: 22 PM
Douglas - Bogagga makhaayadaha waxay u muuqdaan kuwo la yaab leh, si kastaba ha noqotee waxay ku saleysan yihiin cinwaanka maqaalka waxaan rajeynayay in aan awoodo in aan aado meeniska oo aan arko sida saxan kasta oo raashin ahi ugu egyahay sawirrada! Taabadalkeed waxay ahayd "hal madal oo kaliya" Waxaan jeclaan lahaa inaan kula sheekaysto sida Crave.ly ay gacan uga geysaneyso bedelida tan oo ay ka caawiso makhaayadaha inay ku maareeyaan cuntadooda qadka tooska ah iyagoo wata sawirro si ay u soo bandhigaan cuntada sidaad u sheegtay, cuntada ha la hadlaan !
Jun 22, 2015 at 10: 42 PM
Hi Bryan, taasi waa wax fiican! Si firfircoon uma caawinno iyaga laakiin waad gaari kartaa oo waad arki kartaa haddii ay jecel yihiin. Waxaan kaliya hirgelinay nidaamkii ay codsadeen.